Sekoly Vonjimaika Ho An’Ireo Mpianatra Ao Kashmir Ho Fanohizana Ny Fianaran’izy ireo Na Dia Mbola Mitohy Aza ny Ady · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Septambra 2016 15:50 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Ελληνικά, 日本語, Español, English
Ity lahatsoratra ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny Video Volunteers, fikambanana iraisam-pirenena ho an'ny mediam-piarahamonina izay efa nahazo loka ary miorina ao India. Navoaka eto ny dika nasiam-panovana noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Manohana ny fampianarana ny zanak'izy ireo ny fokonolona an-toerana ao Srinagar, Kashmir, ao avaratr'i India na dia teo aza ny ady tsy mitsahatra nandritra ny roa volana farany.
Tsy afaka manatrika fampianarana ara-potoana ireo mpianatra an-tapitrisany ao amin'ny lohasaha noho ny korontana tsy mitsahatra hatramin'ny namonoana an'i Burhan Muzaffar Wani tamin'ny volana Jolay, komandin'ny vondrona mpisintaka Kashmiri Hizbul Mujahideen rangahy io. Nakatona ny sekoly, sy ny orinasa ary ny biraon'ny fitondram-panjakana hafa any an-dohasaha noho ny fisian'ireo hery milisy marobe sy ny tsy fahazoana mivezivezy.
Anisan'ireo tena mijaly indrindra ny ankizy, izay tsy afa-miala ny tranon'izy ireo ary tsy nomena ny zo hianatra.
Tamin'izany fotoan-tsarotra izany, niditra an-tsehatra nampianatra maimaim-poana ho an'ny ankizin'i Kashmir tao amin'ny ‘Sekolin'ny Fotoana Tsy Azo Ivezivezena” ny tanora. Nanomboka tamin'ny volana Aogositra ireo sekolin'ny fokonolona ireo, ary tanora mpilatsaka an-tsitrapo manerana ny fanjakana sy avy amin'ny sehatr'asa samihafa ireo mpampianatra.
“Hatramin'ny nikatonan'ny sekoly, nanatevin-daharana ity foibe ity aho mba hianatra ka amin'izay mba vonona amin'ny fanadinako aho,” hoy i Aabid Hussain tamin'i Shafat Mir Hussein, mpitondra-tenin'ny vondrom-piarahamonina Video Volunteers ao Srinagar, Kashmir. Iray amin'ireo ankizy an-jatony hafa ao Kashmir ampianarina ao amin'ity sekoly vonjimaika tantanina ao amin'ny tranon'olon-tsotra, moskea, sy efi-tranokelin'ny fiarahamamorona ity, ka lasa toeram-piarovana ho an'ny ankizy mba hanohizan'izy ireo ny fianarany.
Satria nankalaza ny faha-50 taonan'ny Andro Iraisam-pirenena ho amin'ny Fahaizana mamaky teny sy manoratra ny firenena marobe tamin'ny 8 Septambra, mampanantena fampianarana sy hoavy tsara ho an'ny ankizy, dia ankizy an-tapitrisany manerana izao tontolo izao no mbola miaritra ady. Olona 82 no namoy ny ainy ary 1.000 no naratra tao amin'ny firenena nandritra ny fifandonana vao haingana teo amin'ny mponin'i Kashmir mitaky fahaleovantena sy ny milisy mitam-piadiana.
Araka ny famoaham-baovaon'ny UNESCO Global Education Monitoring na Fanarahamaso ny Fampianarana Manerantany, antenaina hahavita mampianatra ny olon-drehetra amin'ny fanabeazana fototra i India amin'ny taona 2050, ary ny fampianarana ambaratonga faharoa amin'ny taona 2060 ary ny fampianarana ambaratonga faharoa manokana amin'ny 2085. Satria mikasa ho mpitarika manerantany i India, dia sarotra ny handroso amin'ny fampihenana ny tsy fitoviana, ny fandrisihana amin'ny fanjifàna tompon'andraikitra, ary ny fiantohana ny tsirairay hiaina ara-pahasalamana raha toa ka tsy afaka mifanabe ny olona.